‘केही थाहै छैन’ भन्ने योगेश भट्टराईलाई कसरी थाहा भयो नारायणहिटीभित्र कफी हाउस बनिसकेको ? - माइपोखरी न्युज
Home MAIPOKHARI NEWS POLITICS ‘केही थाहै छैन’ भन्ने योगेश भट्टराईलाई कसरी थाहा भयो नारायणहिटीभित्र कफी हाउस बनिसकेको ?
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रहँदा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रेष्टुरेन्ट खोल्न भाडा दिइएको भन्ने समाचारप्रति ध्यानाकर्षण गराएका नेकपा एमाले सचिव योगेश भट्टराईलेले एउटा कुरा खुलासा गरेका छन् ।
मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भाडामा दिने निर्णयमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताएका उनले आफू मन्त्री बनेर आउनुपूर्व नै त्यहाँ कफी हाउस बनिसकेको बताएका छन् । जुन कुराले उनीमाथि प्रश्न गरेकाे छ ? थाहा हुने मान्छेले किन यसअघि मुख नखाेलेकाे ? तर, उनले मन्त्री रहन्जेल यस विषयमा केही बोलेका थिएनन् ।
तर, नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रेष्टुरेन्ट खोल्न उनी मन्त्री हुँदा भाडामा दिइएको भन्ने समाचार प्रकाशित भएपछि उनले मुख खोलेका छन् । उनले सुरुमा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयसम्बन्धीका कुनै निर्णयमा आफ्नो संलग्न नभएको बताए पनि ‘म मन्त्री हुनु पूर्व नै त्यहाँ कफी हाउस बनिसकेको थियो’ भन्ने शब्दले उनी नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्रकाे गतिविधिसम्बन्धी जानकार नभएको भन्न सकिँदैन । थाहा भएर पनि मुख नखाेलेकाे लख काट्न सकिन्छ ।
तर, उनले आफ्नो छविमा आँच आउने समाचार र टिप्पणी नगर्नसमेत अनुरोध गरेका छन् । उनले फेसबकुमार्फत भनेका छन्, ‘नारायणहिटी दरबार संग्राहालयका बारेमा सार्वजनिक भएको समाचारप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यस सम्बन्धि कुनै पनि निर्णयमा मेरो संलग्नता नरहेको स्पस्ट गर्दछु साथै त्यस बारेका कुनै पनि निर्णय मेरो जानकारीमा समेत नरहेको सबिनय अनुरोध गर्दछु । आफ्नो संलग्नता नरहेको कुनै पनि कामप्रति मेरो जवफदेहीता नरहने स्वतः स्पस्ट छ । बिना कसुर कसैको सार्वजनिक छबीमा आँच आउने समाचार र टिप्पणी नगर्न सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्दछु । मेरो संलग्नता रहेको भए सत्य तथ्य र मेरो हस्ताक्षर सहितको निर्णय कपी वा मेरो लिखित निर्देशन पत्र सार्वजनिक गर्न म चुनैती दिन्छु । स्मरणरहोस म मन्त्री हुनु पूर्व नै त्यहाँ कफी हाउस बनिसकेको थियो ।’